Baylọ Ọrụ Ntụgharị Ugwu East Bay - WRSP
MGBE MGBE MGBE MGBE MGBE MGBE
2001: Otu nke etinyere dika nzukọ okpukpe na-abaghị uru n'okpuru aha "East Bay Dharma Center."
2005: Otu a gbanwere aha ha na "East Bay Meditation Center."
2006: Otu aha ọhụrụ aha ya bụ Leadership Sangha weghaara ndu nke nzukọ ma nakweere ozi ọhụụ ọhụụ, na-ekwupụta na EBMC “tọrọ ntọala na mmemme nke iche iche.”
2006 (October): Emere mmemme izizi maka Ndị Agba.
2006 (Disemba): E mere nnọkọ mbụ maka ndị obodo nke agba.
2007 (Jenụwarị): Baylọ Ọrụ Na-atụgharị Uche nke East Bay meghere ọnụ ụzọ ya na mmemme Ememme Mmeghe na Jenụwarị 20, ụbọchị nke kpachaara anya dabara na ememme ụbọchị ọmụmụ nke Dr. Martin Luther King, Jr.
2007: EBMC kpọrọ ndị otu East Bay LGBT ka ha nọdụ na etiti.
2012 (October): EBMC kwagara ebe ọ dị ugbu a na Oakland.
Kemgbe afọ ndị 1990, ọtụtụ ndị nkuzi na ndị sonyere, ọkachasị sitere na American Insight Community, ebidola ịkpa nkata mkpa ịmepụta ebe ntụgharị uche maka East Bay, mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Mpaghara San Francisco Bay. East Bay nwere ọtụtụ obodo nke Oakland bụ nke kachasị ukwuu, na, n'ozuzu ya, dị iche iche, ndị na-arụ ọrụ na ngalaba ọnụ ala obibi karịa San Francisco. A ga-ahazi etiti a kpọmkwem maka ndị dịgasị iche iche na ọtụtụ ọdịbendị nke East Bay na ga-enye ihe ọzọ maka ndị ọcha na-anọkarị, ndị nọ n'etiti klaasị nọgidesiri ike nọ ọdụ nke gosipụtara mpaghara Insight na Zen nke Bay Bay na Northern California (Gleig 2014) .
Na 2001, otu ahụ etinyere dị ka nzukọ anaghị akwụ ụgwọ n'okpuru aha "East Bay Dharma Center" ma ga-agabiga ọtụtụ mgbanwe n'ime ndị otu tupu oge okpomọkụ, 2006 mgbe naanị mmadụ anọ fọdụrụ na kọmitii ahụ: Charlie Johnson, Larry Yang, Spring Washam na David Foecke. Charlie Johnson bụ onye nkuzi Insight na Yoga onye jere ozi na ndị isi oche na Spirit Rock Meditation Center na EBMC. Larry Yang bụ onye nkuzi nwere nghọta nke mere nnukwu onyinye na iweta ọdịiche dị iche iche na ịmara ọtụtụ ọdịbendị na ọzụzụ na obodo Insight. Spring Washam bụ onye nkuzi Insight onye ama ama nke na-ewetara ndị mmadụ pere mpe uche. David Foecke bụ onye nkuzi nwere nghọta nyere aka n'ịzụlite onyinye mmesapụ aka nke EBMC (usoro akụnụba onyinye). Na Machị, 2007, Mushim Patricia Ikeda, onye nkuzi Buddha zụrụ azụ na onye nhazi dị iche iche na Kitsy Schoen, onye nkuzi Insight, sonyeere ndị otu a. A maara ọnụ ọgụgụ isii a dị ka "ndị nkụzi isi" mbụ na EBMC (Gleig 2014 na East Bay Meditation Center nd).
Dabere na Yang, eziokwu ahụ bụ na mmadụ atọ n'ime mmadụ anọ guzobere (Johnson, Washam na ya onwe ya) bụ ndị nwere agba nwere nnukwu ọdịiche n'ịmepụta etiti nke na-emepụtaghị otu agbụrụ na usoro klaasị nke oke ọcha, n'etiti- klas Insight dị iche iche nke mpaghara Bay. Kama itinye usoro na obodo, ha jụrụ ndị obodo ihe ha chọrọ site na etiti ahụ na nzaghachi ha nwere klas mbụ nke ntụgharị uche nke Onye Ọchịchị na Ọktoba, 2006. Mgbe ha chọtara ebe kwesịrị ekwesị na ụlọ ahịa na obodo Oakland, ha jidere ha ndị mbụ nọrọ ọdụ maka obodo nke agba na Disemba nke otu afọ (Gleig 2014).
EBMC meghere ọnụ ụzọ ya site na mmemme mmemme mmeghe nke gụnyere mmemme ngọzi na nnabata obodo Jenụwarị 20, 2007. Obere oge ka nke ahụ gasịrị, ha kpọrọ ndị otu LGBTQI dị na East Bay ka ha nọdụ na etiti. EBMC etinyela ọtụtụ ndị bi na ndị na-eche echiche echebara echiche. Ndị a gụnyere Egha EBMC dị afọ iri na ụma, otu "Kwa Isi ọ bụla" maka ndị nwere ọrịa na nkwarụ na-adịghị ala ala, otu ndị otu yoga yoga, na mgbake na dharma sangha. Na mgbakwunye na nke a, EBMC ewepụtala kalenda siri ike nke ihe omume gụnyere gụnyere ihe ndị dị ka klaasị omume ezinaụlọ na ebe obibi na esemokwu na-enweghị isi. Ndị bịara ihe omume ndị a mụbara ngwa ngwa, na-enwekarị pasent iri ise na iri isii maka usoro mmemme ụbọchị niile. Iji nweta nnukwu ọchịchọ dị otú ahụ, na 2012, EBMC kwagara n'otu ebe buru ibu karị na obodo Oakland.
EBMC kwuru ebum n’uche ya dị ka “ịkwalite ntọhapụ, ọgwụgwọ onwe onye na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana iwulite ụlọ ndị obodo.” Nke a na-egosi ntinye aka ya na nkuzi Buddha, ọkachasị sitere na usoro nchebara echiche nke Western nke sitere na Theravada Buddha, yana nkuzi nkuzi ikpe ziri ezi nke Dr. Martin Luther King, Jr., Audre Lorde, Grace Lee Boggs, na mmadụ- etinye aka na nkuzi Buddha nke Dalai Lama na Thich Nhat Hanh. N'ihe banyere mmetụta Buddha ya, ọtụtụ n'ime ndị nkụzi na ndị otu ntọala EBMC azụrụ ọzụzụ na American Insight ma ọ bụ Vipassana ije. Nke a bụ ụdị Buddhist modernism nke mere ka ọzigharịa mbido mgbanwe Buddhist Theravada nke mere na narị afọ nke iri na itoolu n'okpuru ndị Western na ndị Asia n'oge a na-achị ọchịchị. Ọdịnala Insight nwere ikike maka omume vipassana na - metta, ebere ịhụnanya na-atụgharị uche, ma na-adọta ọtụtụ n'ime nkuzi mbụ nke Buddha dị ka edere na Pali Canon. Otú ọ dị, ọ bụkwa usoro okpukpe Buddha na-enweghị isi na nke na-esite na nkuzi ụfọdụ nke Mahayana, ọkachasị ndị metụtara ọmịiko. EBMC nwekwara ndị Buddha ndị ọzọ na mmetụta mmụọ site n'aka ndị nkuzi sitere na usoro dị iche iche. Mushim Patricia Ikeda, dịka ọmụmaatụ, bụ naanị onye nkụzi bụ isi na EBMC bụ onye a zụrụ azụ na ngalaba Zen Buddhist Korea, na-ekwusi ike n'ụzọ nke Bodhisattva, nke pụtara ìhè na agbụrụ Mahayana. Ndị nkuzi ndị ọzọ nwere ọzụzụ na yoga na usoro ọmụmụ ime mmụọ ndị ọzọ ma weta mmetụta ndị a n'etiti. Na mgbakwunye, ndị nkuzi EBMC na-esitekarị na akwụkwọ nke ndị nkuzi Buddhist a ma ama, dị ka Jack Kornfield na Pema Chödrön.
EBMC kwenyesiri ike na ikpe ziri ezi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ na-ekerịta ọtụtụ ebumnuche nke okpukpe Buddha, nke na-achọ itinye ụkpụrụ na omume Buddha iji kwụsị nhụjuanya bụ n'ihi ọnọdụ mmekọrịta ọha na eze na-ezighị ezi yana o nwere njikọ siri ike na Buddhist Peace Fellowship. N'ihe banyere otu esi gosipụta nke a na nkwenkwe na omume, EBMC bụ akara nyocha nke otu esi etinye usoro nkuzi na omume Buddhist ntọala maka okwu ndị dị iche iche nke oge a, ntinye na ikpe ziri ezi. Dịka ọmụmaatụ, EBMC anabatala echiche nke ịnweta ụwa ma rụọ ọrụ na nghọta nkwarụ na ebe obibi n'ofe usoro nhazi ya ruo n'ókè nke ihe onwunwe kwere (Ikeda 2014a, 2014b, 2014c, 2014d).
EBMC na-ejide ndị na-atụgharị uche n'izu kwa izu, bụ ndị na-elekwasị anya na ntụgharị uche Vipassana. Ọ na-eburu n'uche mmeghari kwa izu dika "ABC (All Bodies Centering) Yoga," Yoga maka Ndị Na-acha Agba, na "Qi Gong maka Ndị Mmadụ" otu ìgwè nke na-eme mmega echiche ntụgharị uche nke Qi Gong. Otu ọ bụla dị iche mana iji mata otu ụdị ụdị otu, ileba anya na nhazi Alphabet Sangha, otu LGBTQI, bara uru. Mkpụrụedemede Sangha bụ otu otu na-adaba, na-ezukọ otu ugboro n'izu, na mgbede Tuesday ọ bụla, maka otu awa na ọkara. Ọ na-amalite site na ọrụ icebreaker na ọrụ ụlọ nke a na-akpọ ndị bịara ya ka ha kwurịta ajụjụ metụtara dharma na obere ìgwè. Nke a na-esochi ntụgharị uche nkeji iri anọ, ọ na-abụkarị ma ọ bụghị naanị vipassana, mgbe ahụ enwere obere ezumike tii na ohere iji soro ndị ọkachamara ibe gị kparịta ụka. Anyasị na-agwụ site na okwu dharma nke onye nkuzi nke otu ahụ nyere, nke nwere ike ịbụ akụkụ nke usoro okwu ogologo ma ọ bụ bụrụ okwu nwere ike ịnọrọ onwe ya maka mgbede. Okwu dharma ndị a na-eleba anya na nkuzi ntọala, dịka otu ụzọ nke asatọ. Ndi nkuzi gha aghaghi ichoputa ma obu onye nkuzi LGBTQI achoputara. Sangha nwere ọtụtụ ndị nkuzi oge niile nọ na Bay Bay dị ka Joan Doyle, Shahara Godfrey, na Anushka Fernandopulle ma na-akpọkwa ndị nkuzi nleta dịka Arinna Weisman. Anyasị na-ejedebe na ọkwa sangha na a dana okwu sitere n'aka otu ndị ọrụ afọ ofufo na-abịa n'isi ụtụtụ iji dozie ìgwè ahụ. Ọ na - agwakọta ndị na - abịa ya oge niile yana na - enwetakpọ ndị ọhụụ ọhụụ (Gleig 2012).
N'akụkụ otu izu na-anọ ọdụ, EBMC na-agba ọtụtụ ezumike ụbọchị na ebe obibi na mgbede. chọrọ ndebanye. Ekwesiri ikwuputa banyere mmemme nke otu afọ nke emeputara iji gboo mkpa nke na kwado mmepe nke ndi oru nwere mmuta kari. Larry Yang agbaala ọtụtụ mmemme "Commit2Dharma" (C2D) na Mushim Patricia Ikeda duru ọtụtụ Omume na mmemme Transformative Action. Mmemme ndị a toro ogologo na-enye ọzụzụ dị omimi karị ma gụnye akụkụ dị ka ọmụmụ akwụkwọ Buddhist bụ isi n'ihe gbasara C2D, yana ọzụzụ na nchebara echiche nke ụwa maka ndị na-eme ihe maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ndị ọrụ mgbanwe. Bido na Jenụwarị 2015, EBMC ga-enye ọzụzụ ọnwa isii maka ndị ọcha, White Allies Active and Awakening (WAAA). Ezubere WAA iji wulite mmata na nka nke ndị ọcha Dharma na-arụ ọrụ maka imepụta sangha na EBMC. N'ikpeazụ, kwuru kwesịkwara ime ka ndị ọgbọ na-agba ọsọ "Deep Refuge" dị iche iche na etiti gburugburu na-akọrọ mbipụta na njirimara na iji wuo ike sanghas n'ime wider EBMC sangha.
Na mgbakwunye na ememme Buddha na ntụgharị uche dị iche iche a na-enye na EBMC, a ga-adọrọ uche gaa na ndepụta ya nke omume dịgasị iche iche. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu na weebụsaịtị ya ma were ya dị ka ntọala dị ka omume Buddha. N'ezie, mgbe EBMC meghere, ndị otu tinye ọkọlọtọ egwurugwu LGBTQI n'elu mgbidi tupu ha agbakọta ebe ịchụàjà. Nke a bụ iji gosipụta ntinye uche ya na ụdị dịgasị iche iche na mbido kama naanị ịga ya azụ n'oge na-adịghị anya dịka ụdị "ịpụpụ ndepụta ndepụta dị iche iche" ma ọ bụ "nri na mmemme" mgbakwunye. Nkwenye a na iche iche na nsonye emeela ka nkọwa, ndọtị na ọhụụ nke omume Buddha oge gboo iji tinye aka na ọnọdụ nke ịkpa ókè agbụrụ, classism, homophobia na ụdị mmegbu ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, Larry Yang emepewo ndepụta a kapịrị ọnụ nke usoro mmụta iche iche dị iche iche, nke na-esite na nkuzi iri na anọ nke Mindfulness nke Vietnam monk Thich Nhat Hanh iji tinye omume nke itinye uche na ihe gbasara ịkpa oke na ikpe na-ezighị ezi (Yang 2004). Na mgbakwunye, na mmemme a na-eme n’obodo, a na-akpọ ndị sonyere ka ha kwuo aha ndị a họọrọ maka onwe ha, tinyere aha ha, na aha aha iji kwado nkwukọrịta nkwanye ugwu na iji bulie mmata gburugburu usoro okike na-abụghị mmadụ abụọ
EBMC emeela otu nzukọ na usoro ndu nke gosipụtara nraranye ya na iche iche na nsonye na-enweghị isi, ntinye uche nke na-agụnye ndị na-emebighị aha ha na ndị emegburu ha. Dika ekwuru na websait ya, EBMC na aru oru site na “uzo ochichi onye kwuo uche ya, usoro mmesapụ aka na gburugburu ebe obibi ịdịgide adịgide. ” N'ihe banyere ọchịchị ochichi onye kwuo uche ya, o nwere ndị isi nchịkwa a na-akpọ Kọmitii Leadership Sangha (nke nwere ndị isi asaa) nke a kwadoro ma gosipụta ọtụtụ ndị nkuzi na ndị nkuzi. Isi ihe ndi nkuzi EBMC nile choro bu na ha nwere nghota zuru oke banyere ntinye na ntinye di iche iche. EBMC na ndi oru ndi ozo na ndi ozo, ma o nweghi mmekorita ya na ndi ozo. Enwere njikọ siri ike, agbanyeghị, n'etiti ndị nkuzi na ebe etiti na Bay Bay. Dịka ọmụmaatụ, Larry Yang na Spring Washam bụ ndị otu Council Council na Spirit Rock Meditation Center, na Mushim Patricia Ikeda ejewo ozi dị ka onye nkuzi nleta na onye ndụmọdụ dị iche iche maka San Francisco Zen Center. Ọ bụkwa onye bụbu onye isi na San Francisco Zen Center na Buddhist Peace Fellowship. Charlie Johnson, otu n'ime ndị nkuzi ntọala EBMC, jere ozi na bọọdụ nke Rock Rock.
Ọzọkwa, n'ikwekọ na ntinye ya na iche iche na nsonye, ​​EBMC mepụtara ndepụta nke omume dịgasị iche iche dị ka nsuso, ịchekwa ohere maka na ihe omume mgbasa ozi nye obodo ndị akọwapụtara nke ọma (ọkachasị Ndị Agba, bụ ndị na-emebighị akụkọ ihe mere eme na Buddhist US tọghatara. obodo). Ntinye site na EBMC Sangha sara mbara ka a na-akpọkarị site na ụdị nyocha, nzukọ obodo, na mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta. Onye ọ bụla nwere ike ịkọwapụta ịkụziri klaasị ma ọ bụ ụlọ ọrụ na EBMC, site na usoro ntinye akwụkwọ nke na-ajụ ndị na-achọ ka ha gosipụta etu ihe ha zubere isi gosipụta ga-adị mkpa maka ọdịmma na mkpa nke ọtụtụ ndị na-ege ntị na ọtụtụ ọdịbendị (Mkparịta ụka onwe onye na Patricia Mushim Ikeda, 2014) .
EBMC na-arụ ọrụ na "onyinye akụnụba", na mmemme niile na ihe omume (ma e wezụga usoro nchịkọta ego) na-enye n'efu na onyinye iji mee ka accessiblelọ Ọrụ ahụ nwee ike ịnweta ndị mmadụ niile ọkwa ego. Na Buddha, a na-akpọkarị akụnụba onyinye dị ka omume nke dana, a Pali okwu maka omume nke mmesapụ aka na-enye ma ọ bụ na-enye onyinye, nke bụ otu n'ime parami s ma ọ bụ oke s ma ọ bụ izu okè (omume ọma / ọzụzụ) na Theravada na Mahayana Buddha. A na-akpọ ndị sonyere ka ha nye onyinye na mmemme ọ bụla, na-enye Center na otu igbe nchịkọta yana iche na ndị nkuzi na igbe nke abụọ. Ha na-agbakwa ha ume ka ha bụrụ "Enyi nke EBMC" ma na-enye onyinye kwa ọnwa iji kwado Center. E nwere ndị ọrụ oge ise ise na ọtụtụ narị ndị ọrụ afọ ofufo na-eme ka EBMC na-arụ ọrụ kwa ụbọchị.
N'ikpeazụ, EBMC kwenyesiri ike na nkwado gburugburu ebe obibi. A na-ahụ nke a n'ọtụtụ omume site na ịkọwapụta akwa nhicha aka niile a na-eji emegharị emegharị n'ime ime ụlọ ịwụ, na ịzụta arịa iri nri compostable maka ihe omume ebe a na-enye nri, iji naanị ihe na-emebi emebi, ihe na-esi ísì ụtọ na nke na-adịghị egbu egbu.
EBMC chere ọtụtụ nsogbu dị n'ime na mpụga anya kemgbe ọ malitere. Ihe ịma aka na-aga n'ihu na-aga n'ihu maka EBMC bụ ịnọgide na-enwe ahụike na ego. Rụ ọrụ site na akụnụba onyinye, nke a na-enye nkuzi na ihe omume niile na EBMC na onyinye, nwere ike ime ka o siere Centerlọ Ọrụ ahụ ike ikpuchi ụgwọ ọ na-akwụ kwa ọnwa dị ka mgbazinye, mkpuchi, na ndị ọrụ peerolu. Imirikiti ndị na-aga ihe omume na EBMC na-abụ obere ego. EBMC nwara ime ihe ịma aka a site n'ịgba ndị obodo ya ume ka ha bụrụ ndị na-enye onyinye kwa ọnwa site na mmemme nke EBMC, ma ọ bụ ịnakwere usoro ịkwụ ụgwọ ụgwọ kwa ọnwa (dịka mkpuchi ma ọ bụ ọrụ Internetntanetị). Ihe ndi ozo na-achota bu Dharma-thon kwa afo, ihe omume iri na abuo nke dharma na-aga n'ihu na Oakland. Ndị sonyere na-ebulite ego nkwado ma hazie mmemme erite uru ya na ndị nkuzi ama ama ama ama na Buddhist US.
Otu nsogbu dị n'ime EBMC chere ihu bụ ịchọta ndị nkuzi tozuru oke na ọzụzụ Buddhist na ịmara ụdị dịgasị iche iche na nghọta ọdịbendị. N’akụkọ ihe mere eme, obodo Insight na Zen Buddhist anabatabeghị usoro ọzụzụ dị nro nke ọdịbendị, nke a emeela ka enweghị nghọta zuru oke na ndị nkuzi ọcha yana enweghị ike isonye na ndị otu pere mpe na nkuzi na idu ndú. Karịsịa n'ihi mbọ nke ndị nkuzi ọ bụla, dị ka Larry Yang, agbanyeghị, mgbanwe na-ewere ọnọdụ nwayọ nwayọ. Dịka ọmụmaatụ, n'ihi mgbalị Yang, na 2012 na Community Dharma Leaders Program na Spirit Rock Meditation Center nwere pasent 2011 nke ndị nwere agba na / ma ọ bụ LGBTQI mara ma e jiri ya tụnyere pasent asatọ nke ọzụzụ gara aga. Nke a bụ ihe akaebe banyere mmetụta sara mbara na onyinye pụrụ iche nke EBMC na-enye maka nnukwu Buddhist US gbanwere mmekọrịta (Yang 2012, 2012a, 2014b, Ikeda, XNUMXa).
Nsogbu ọzọ dị n'ime maka EBMC bụ nke "esemokwu dị iche iche" nke ọnọdụ ọdịbendị dị iche iche na-ese okwu ma ọ bụ na-emegide ya. Ihe atụ nke a bụ amụma EBMC iji mee ka ohere ghara ịnwe isi ísì iji mee ka etiti ahụ nweta ndị na-ata ahụhụ n'ọtụtụ kemịkal na mmerụ kemịkal. Esemokwu a bụ na maka ụfọdụ ndị ọkachamara, iji ngwaahịa na-esi ísì ụtọ na ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ bụ akụkụ dị mkpa nke njirimara na ngosipụta nke ọdịbendị. N'ozuzu, a na-ahụ ihe ịma aka ndị a dị ka ohere omume ndị ọzọ, yana atụmanya nchekwube sitere na usoro ụwa (dị ka ikpe ziri ezi na-edozi, mkpebi esemokwu) na ụdị Buddha (dị ka okwu amamihe) iji zute ha (Gleig 2012).
Ihe ịma aka dị na mpụga nke ndị nkuzi EBMC na EBMC chere ihu bụ nguzogide site na ndị Buddhist US tọghatara obodo iji kwado maka otu ndị dabere na njirimara na itinye aka n'ụzọ zuru oke n'okwu dị iche iche. Nke a emeela ka ụfọdụ ụlọ ọrụ kagbuo ma ọ bụ jụ ịmalite ezumike ma ọ bụ ndị nọ ọdụ. Ndị nkuzi EBMC na-eche na nke a mere n'ihi na ndị nkuzi na-enweghị mmata dị iche iche kwenyere na ịsọpụrụ ọdịbendị ọdịiche dị iche na nkuzi Buddhist ntọala, dịka nkà ihe ọmụma nke anatta (onwe ya, ma ọ bụ enweghị onwe ya na-agbanwe agbanwe) ma na-eyi ịdị n'otu nke Buddhist sangha egwu. Larry Yang ekewetde ụfọdụ nke nguzogide a na nhazi nke mmụọ dị ka “ihe obi ụtọ, udo na ịdị mma,” yana amaghị ihe banyere usoro nhụjuanya sitere na agbụrụ, klas na enweghị okike. Na nzaghachi, Yang emepewo usoro ihe omimi di iche iche nke o na atughari ihe omuma ato ma obu Buddha nke Buddha (Buddha, Dharma, na Sangha) site na uzo di iche-iche di iche-iche na di iche-iche. Yang, na ndị ọzọ, na-agụ iche iche dị ka pụta ụwa na nkwado na ntọala Buddhist ozizi na akụkọ ihe mere eme. Ndị nkuzi EBMC niile bụ ndị nkwado siri ike maka "Dharma na iche iche" yana nghọta metụtara ọha na eze banyere omume na ọmụmụ Dharma (Gleig 2012; Yang 2011, 2012a, 2012b).
Ekwesiri ighota na n'agbanyeghi nguzogide site na otutu akuku nke ndi Buddha ndi United States buru ibu, EBMC enwetawo nkwado nke otutu ndi nkuzi na ndi mmadu ama ama, dika Jack Kornfield, Joseph Goldstein na Alice Walker. EBMC nke Jenụwarị, 2015 na-enweta ego na-egosi mkparịta ụka n'etiti onye na-ede akwụkwọ na onye edemede, Angela Davis, na Jon Kabat-Zinn, onye guzobere Mindfulness dabeere na Mbelata Mbelata. Obodo EBMC nwekwara njikọ siri ike na nkwado sitere na Buddhist Peace Fellowship, na ọtụtụ ndị sonyere nwere nkwa maka obodo abụọ ahụ.
Achọrọ m ịnakwere enyemaka nke Patricia Mushim Ikeda n'ịchịkọta na ịkọwa ozi na East Bay Meditation Center maka profaịlụ a.
Baylọ Ọrụ Ntụgharị Ugwu East Bay. nd Nweta site na http://www.eastbaymeditation.org na 7 December 2014.
Gleig, Ann. 2014. "Dharma di iche iche na omimi di omimi na East Bay Meditation Center: Site na Buddhist Modernism na Buddha Postmodernism?" Buddha oge a: Akwụkwọ akụkọ na-akwadoghị 15: 312-31.
Gleig, Ann. 2012. “Queering Buddha ma ọ bụ Buddha De-Queering? Tụgharị uche na Ọdịiche dị n'etiti Western Buddhist LGBTQI na Mmachi nke Liberal Convert Buddhist. ” Akwụkwọ nke Okpukpe na Mmekọahụ 18: 198-214.
Ikeda, Patricia Mushim. 2014a. "Otu anyị si egosi: Akụkọ akụkọ, Mgbanwe Mgbanwe na Eziokwu Nke Mbụ," Buddha Udo Udo, March 11. Nweta site na http://www.buddhistpeacefellowship.org/tss-2014/1-mushim/ na 7 December 2014.
Ikeda, Patricia Mushim. 2014b. "Ihe Anyị Na-eleghara Anya Na-eme Ka Anyị Mara: Akụkọ Akụkọ, Mgbanwe Mgbanwe na Eziokwu Nke Abụọ Nke Abụọ," Mmekọ nke udo nke Buddha April 8. Nweta site na http://www.buddhistpeacefellowship.org/tss-2014/2-mushim/ na 7 December 2014.
Ikeda, Patricia Mushim. 2014c. "Ncheta bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị: Akụkọ akụkọ, Mgbanwe Mgbanwe na Eziokwu Nke Atọ," Mmekọ nke udo nke Buddha August 4. Nweta site na http://www.buddhistpeacefellowship.org/memory-is-political-storytelling-movement-building-and-the-third-noble-truth/ na 7 December 2014.
Ikeda, Patricia Mushim. 2014d. "Akụkọ ọhụrụ nke anyị: Akụkọ akụkọ, Mgbanwe Mgbanwe na Eziokwu Nke Anọ," Mmekọ nke udo nke Buddha Ọktọba 28. Nweta site na http://www.buddhistpeacefellowship.org/a-new-story-of-us-storytelling-movement-building-the-4th-noble-truth/ na 7 December 2014.
Yang, Larry. 2011. "Buddha bụ Omenala." Huffington Post, June 19. Nweta site na http://www.huffingtonpost.com/larry-yang/buddha-culture_b_1192398.html na 7 December 2014.
Yang, Larry. 2012a. "Dharma bụ Omenala." Huffington Post, June 27. Nweta site na
http://www.huffingtonpost.com/larry-yang/dharma-culture_b_1599969.html na 7 December 2014.
Yang, Larry. 2012b. "Sangha bụ Omenala." Huffington Post, October 7. Nweta site na http://www.huffingtonpost.com/larry-yang/sangha-culture_b_1600095.html na 7 December 2014.
Yang, Larry. 2004. “Iduzi Uche Na-eme Omume na Di iche iche” Nweta site na http://www.larryyang.org/images/training_the_mind.3.pdf . na 7 December 2014.
Adams, Sheridan, Mushim Patricia Ikeda, Jeff Kitzes, Margarita Loinaz, Choyin Rangdrol, Jessica Tan na Larry Yang. nd Ime Ka A Na-ahụ Anya: Racgwọ Ọgwụ Na-agwọ Ọrịa na Okpukpe Buda Anyị, Nke Atọ. Nweta site na
http://insightpv.squarespace.com/storage/MTIV%203rd%20ed.pdf na 7 December 2014.
Buddhadharma. 2012. "M Kwere Nkwa Nchịkwa Ndọrọ Ndọrọ Ọchịchị: Buddha, Mgbanwe Ọha na Ọkachamara." Mbigharị Ọdụm: Amamihe Buda Maka Oge Anyị, February 11. Nweta site na http://www.lionsroar.com/i-vow-to-be-political-buddhism-social-change-and-skillful-means/ na 7 December 2014.
Ikeda, Patricia Mushim. 2014. "Ezigbo Mgbaba: Buildinglọ Nzukọ na-anabata Sanghas." Tricycle ezumike online. Nweta site na http://www.tricycle.com/online-retreats/real-refuge-building-inclusive-and-welcoming-sanghas na 7 December 2014.
Ikeda, Patricia Mushim. 2014. nwunye # 4: Iwuli Diversity-Mature Sanghas, (Podcast) “Gbanyụọ ndị fom na Danny Fisher,” October 12. Nweta site na http://dannyfisher.org/2014/10/12/episode-4-building-diversity-mature-sanghas/ na 7 December 2014.
Yang, Larry et al. 2011. "Gịnị mere Buddha ndị America ji dị ọcha?" Buddhadharma: Onye Nzuzo Na-arụ Ọrụ, November 10. Nweta site na
http://www.lionsroar.com/forum-why-is-american-buddhism-so-white/ na 7 December 2014.
OZI BAY MEDITATION CENTER Njikọ vidiyo